Etu esi etinye akara mmiri na foto site na ekwentị na PC 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Itinye akara mmiri na foto bụ ụzọ iji jikọọ aha ma ọ bụ azụmaahịa gị na onyonyo. Ugbu a, enwere ọtụtụ mmemme na ngwa na-enye gị ohere itinye akara gị, ma ọ bụ na ekwentị gị ma ọ bụ na PC gị, na usoro ole na ole. Lee ka o si di nfe.
Ifinye watermark na foto dị na ekwentị gị, ka anyị jiri PicsArt ngwa. Na mgbakwunye na ịnwere onwe gị, ọ na-enye gị ohere iji ma onyonyo ma ederede, n'ụzọ nke ahaziri iche. Ya mere, tupu ịgbaso nzọụkwụ site nzọụkwụ, ọ dị mkpa iji budata ngwa ahụ na ngwaọrụ gam akporo ma ọ bụ iPhone gị.
1. Mepee PicsArt wee mepụta akaụntụ ma ọ bụ jiri Gmail ma ọ bụ Facebook jiri data gị abanye;
Ọ bụrụ n’ịhụ ntụnye ịdenye aha na ngwa ahụ, pịa X, na-adịkarị na elu ihuenyo iji mechie mgbasa ozi. Nhọrọ ịtinye akara mmiri dị n'etiti ihe onwunwe efu nke ọrụ ahụ.
2. Na Ihuenyo mbu, metụ + ịmalite;
3. Metụ foto ebe ịchọrọ ịtinye akara mmiri iji họrọ ya. Ọ bụrụ na ịhụghị ya, gaa Foto niile ile foto niile dị na ngwaọrụ gị;
4. Dọrọ ogwe aka na ala nke ihe oyiyi iji hụ ọrụ niile. M metụrụ aka Ederede;
5. Dee aha gị ma ọ bụ nke ụlọ ọrụ gị. Kpatụ akara ngosi ego (✔) mgbe ịmechara;
6. Tupu ịmalite idezi, tinye ederede na ebe ịchọrọ. Iji mee nke a, metụ ma dọrọ igbe ederede.
Enwere ike ịbawanye ma ọ bụ belata igbe ederede na, n'ihi ya, akwụkwọ ozi ahụ, site na imetụ na ịdọrọ na okirikiri nke gosipụtara n'akụkụ ya;
7. Ugbu a, ị ga-ejirịrị ihe eji edezi ederede ịhapụ akara mmiri dịka ịchọrọ. Ihe ndị a dị:
Fuente: Enyele ụdị akwụkwọ ozi dị iche iche. Mgbe ị metụrụ ihe ọ bụla aka, a na-etinye ya na ederede etinyere na foto ahụ;
Kọr: Dị ka aha ya pụtara, ọ na-enye gị ohere ịgbanwe agba nke leta ahụ. Lelee na n'oge na-adịghị, a ka nwere nhọrọ iji gụnye grajentị na udidi;
Ibe: na-enye gị ohere itinye ókè na leta ahụ wee họrọ oke ya (na mmanya Ọnụ);
Opachie: gbanwee nghọta nke ederede. Nke a bụ ihe dị mkpa ka etinyere mmiri mmiri ahụ n'ụzọ dị aghụghọ, na-enweghị ịkpaghasị echiche nke foto ahụ;
Sombra: arụ ọrụ iji tinye ntinye ederede. Ọ na-enye ohere ịhọrọ agba maka shading, yana ịhazigharị ike ya na ọnọdụ ya;
Bueno: fanye curvature na okwu ma obu akpaokwu, dika akuku akowara na ogwe Iji apịaji. Dabere na ụdị azụmahịa ị nwere, ịnwere ike inye akara gị aka iru ala.
8. Mgbe edezichara, gaa na akara ngosi ego (✔) n'akụkụ aka nri elu nke ihuenyo ahụ;
9. Iji chekwaa nsonaazụ, pịa akara ngosi akụ na akuku aka nri elu;
10. Na ihuenyo ọzọ, gaa Chekwaa ego wee banye Chekwaa na ngwaọrụ gị. A ga-echekwa onyonyo a na Gallery ma ọ bụ Ọbá akwụkwọ nke ekwentị gị.
Tinye ihe onyonyo dị ka akara mmiri
PicsArt na - enye gị ohere itinye akara ngosi ụlọ ọrụ gị kama ịpịnye aha gị. Iji mee nke a, ị ga-ebu ụzọ nweta akara ngosi njirimara gị na JPG na gallery o Biblioteca ekwentị.
Ya mere, soro ndị a nzọụkwụ 1 ka 3, gosiri n’elu. Mgbe ahụ, na tree ngwá, enweta A. Foto. Họrọ faịlụ achọrọ ma gosi na Tinye.
Dị ka ederede, ị nwere ike ịgbanwe ọnọdụ na akụkụ nke onyonyo etinyere site na ịpị na ịdọrọ. Iji megharia ka ị na-enwe ogo, anyị na-atụ aro ka ị họrọ akara ngosi akụ abụọ.
Odori logo, gaa na nhọrọ Opachie, dị na ala nke ihuenyo ahụ. Belata ya ka ọ pụta ìhè ka ọ ghara ichegbu ihe oyiyi ahụ, mana ọ ka na-ahụ anya. Mezue usoro ahụ na akara ngosi nkwenye (✔) n'elu ihuenyo ahụ n'aka nri.
Iji chekwaa nsonaazụ, pịa akara ngosi akụ na akuku aka nri elu na ihuenyo na-esote gaa Chekwaa ego. Kwenye mkpebi na Chekwaa na ngwaọrụ gị.
Na nkuzi ozo, anyi ga eji weebụsaịtị iLoveIMG. Ọrụ ahụ na-enye ohere itinye akara mmiri na foto na ederede, yana ịhazi nha na opacity. Onye ọrụ nwekwara ike mfe otutu multiple foto n'otu oge.
1. Mepee ihe nchọgharị ị họọrọ ma nweta ngwá ọrụ iLoveIMG watermark;
2. Pịa na bọtịnụ Họrọ ihe oyiyi ma họrọ onyonyo nke ịchọrọ itinye akara mmiri na kọmputa gị;
3. Usoro itinye akara mmiri na ihe oyiyi na ederede yiri:
A) Na foto: ọ bụrụ n'ịchọrọ itinye ihe onyonyo dịka akara ụlọ ọrụ gị, pịa Tinye Image. Wee họrọ onyonyo dị na PC gị.
Nke abụọ Na ederede: pịa na Tinye ederede. Dee ederede achọrọ, dị ka aha gị ma ọ bụ akara gị. Nwere ike hazie akụkụ ndị a nke egwu:
Fuente- ingpị Arial na-egosiputa nhọrọ ndị ọzọ;
mgbasa ozi: dị na akara ngosi nwere leta abụọ T (Tt);
Estilo: ụdịdịnke abụọ), italicyo) na gosi (U);
Agba ndabere: na ịpị akara agba ịwụ agba;
Akwụkwọ ozi agba na ezumike: dị site na ịpị akara ngosi leta UN
Usoro: na akara ngosi e guzobere akara atọ, ọ ga-ekwe omume etiti ma ọ bụ yie ihe ederede.
4. Mgbe ahụ debe ihe oyiyi ma ọ bụ igbe ederede na ebe ịchọrọ site na ịpị na ịdọrọ. Iji gbanwee, pịa na gburugburu dị n’akụkụ wee dọrọ;
5. Hazie opacity, pịa a square icon na n'umu n'ime. Ogwe ga-apụta ebe ị nwere ike ịbawanye ma ọ bụ belata ogo nghọta;
6. Ọ bụrụ na ịchọrọ itinye otu akara mmiri ahụ na onyonyo ndị ọzọ, pịa ebe a +, n'akụkụ aka nri nke foto ahụ. Wee họrọ onyonyo ndị ọzọ dị na PC gị;
Nwere ike pịa na nke ọ bụla iji hụ otú ngwa ga-adị ma gbanwee n'otu n'otu, ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
7. Pịa na bọtịnụ Ihe ngosi mmiri;
8. Download faịlụ na Budata onyogho ndị mmiri gbara. Ọ bụrụ na i tinye akara mmiri ahụ na ọtụtụ onyonyo n'otu oge, a ga-ebudata ha na faịlụ na usoro .zip.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịrụ ọrụ na ntanetị ma ọ bụrụ na ị chọghị ịkwụ ụgwọ maka ngwa mmezi, ịnwere ike iji Paint 3D. Ihe omume a bu ihe ama ama na Windows 10. Ọ bụrụ na ị nwere ụdị nke sistemụ arụnyere na kọmputa gị, ikekwe ị nwere sọftụwia ahụ
N'adịghị ka nhọrọ ndị gara aga, ọ gaghị ekwe omume ịgbanwe opacity. Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ nsonaazụ aghụghọ ọzọ, ọ ga-aka mma iji ụfọdụ azịza egosipụtara n'elu.
1. Meghee Agba 3D;
2. pịa na Menu;
3. Wee gaa Fanye ma họrọ foto nke ịchọrọ itinye akara mmiri ahụ;
4. Na foto oghe na usoro ihe omume, pịa Ederede;
5. Pịa na foto na-abanye na watermark ederede. Na aka nri nke ihuenyo, ị ga-ahụ nhọrọ dị maka ọrụ ederede. Iji tinye ha n'ọrụ, buru ụzọ họrọ ederede na oke.
Ederede 3D ma ọ bụ 2D- Ọ ga - eme ihe dị iche ma ọ bụrụ na ị na - eji ọrụ 3D View or Mixed Reality arụ ọrụ;
Font ụdị, nha na agba;
Styledị ederede: ike (N), italic (yo) na gosi (S)
Mụrụ jupụta- Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ederede ka enwe ụcha acha. N'okwu a, ịkwesịrị ịhọrọ ndò chọrọ na igbe dị n'akụkụ ya.
6. Iji debe ederede ebe ịchọrọ ya, pịa ma dọrọ igbe ahụ. Iji gbanwee igbe ederede, pịa ma dọrọ akụkụ anọ ndị dị na nsọtụ;
7. Mgbe ịpịrị na mpụga ederede ederede ma ọ bụ pịa igodo ntinye, a ga-edozi ederede ahụ ebe etinyere ya ma gharazie idezi ya;
8. Iji mechie, gbasoo ụzọ: NchNhr → Chekwaa dika → Image. Họrọ usoro nke ịchọrọ ịchekwa ma kwụsị na Chekwaa.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ iji akara ngosi ụlọ ọrụ gị, mee ya nzọụkwụ 1, 2 na 3 wee megharịa ha, mana oge a, imeghe ihe oyiyi logo. Mgbe ahụ nanị mee mgbanwe ndị egosiri na nzọụkwụ 6 ma chekwaa, dịka egosiri na nzọụkwụ 8.
Otu esi eme isi okwu na Okwu
Ndị editọ vidiyo kacha mma maka ngwaọrụ mkpanaka
'Photoshop' Online: Best Free Photo Editor Alternatives